Dabkii Xuutiyiinta ayaa sababay dabkii Yemen ee ku dhintay muhaajiriinta Sanca: HRW - Wardeeq 24 TV Dabkii Xuutiyiinta ayaa sababay dabkii Yemen ee ku dhintay muhaajiriinta Sanca: HRW Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dabkii Xuutiyiinta ayaa sababay dabkii Yemen ee ku dhintay muhaajiriinta Sanca: HRW
“Mashruucyo aan la aqoonsan” oo ay bilaabeen fallaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa sababay gubasho 7-dii Maarso oo ay ku dhinteen tobanaan qof xarun muhaajiriin lagu hayey oo ku taal caasimada Sanca, sida ay sheegtay Human Rights Watch (HRW).[resads_adspot id=”1″]
“Tiro badan oo muhaajiriin ah ayaa lagu gubay dalka Yemen bishii Maarso 7, 2021, kadib markii ciidamada amaanka ee Xuuthiyiinta ay bilaabeen mashruucyo aan la garanayn oo ay ku jiraan xarunta lagu hayo dadka muhaajiriinta ah ee Sanca, taas oo sababtay dab,” HRW ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay Talaadadii.
Dabka wax dila ayaa ka dilaacay xarunta soogalootiga ee Yemen: UN
Sidee loo joojiyaa macaluusha ka taagan Yemen?
Blinken to UN’s Yemen envoy: Ma jiro xal milatari oo laga gaaro khilaafka
Waxay tiri maxaabiista – badankood muhaajiriinta Itoobiyaanka ah iyo qaxootiga – waxay ka mudaaharaadayeen ciriiriga badan markii ilaalada xerada ay boqolaal kamid ah ku xireen hangar kadibna ay labo xabbadood ku dhufteen dhismaha.
Muhaajiriinta waxay yiraahdeen mashruuca koowaad wuxuu soo saaray qiiq badan wuxuuna indhahooda ka dhigay biyo iyo qaniinyo. Midda labaad, oo ay tahriibayaasha ugu yeeraan ‘bam’, ayaa si weyn u qarxay dabna bilaabay, ”ayay tiri HRW.
Waxay intaas ku dartay in boqolaal maxaabiis dhaawac ah lagu daweynayo isbitaalada Sanca halkaas oo “joogitaan amni oo culus” ay dhibaato ku keentay hay’adaha samafalka.
Fallaagada Xuutiyiinta, oo gacanta ku haysa inta badan waqooyiga Yemen, oo ay ku jirto caasimadda Sanca, ayaa la dagaallamayay guluf militari oo uu hoggaaminayo Sacuudiga tan iyo bishii Maarso 2015.
Isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa soo farageliyay taageerada dowlada uu caalamku aqoonsan yahay, oo ay afgambisay kooxda xiriirka la leh Iran. Dagaalkan lixda sano socday ayaa halakeeyay wadanka saboolka ah ee 29 milyan, iyadoo boqolkiiba 80 dadka ku nool ay hada ku tiirsan yihiin gargaarka shisheeyaha.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Ururka Caalamiga ee Socdaalka (IOM) wuxuu ku boorriyay fallaagada in ay si aan caqabad lahayn u soo gaaraan dhaawacyada.
Waxay sheegtay in in ka badan 170 qof la dhaawacay, in ka badan kalabarna ay dhaawacyo qabaan, in ka badan 60na ay dhinteen.
Isaga oo la hadlaya HRW, afhayeenka Xuutiyiinta Mohammed Abdulsalam ayaa sheegay in dhacdada “aysan ahayn in la siyaasadeeyo ama laga faa’iideysto”.
“Dhacdada dhacday waxay ahayd natiijo caadi ah oo ka dhacda dhacdooyin isku mid ah adduunka oo dhan,” ayuu yiri, sida lagu sheegay bayaanka.
Wuxuu ku baaqay in laga qaado xayiraada dheer ee uu hogaaminayo Sacuudiga ee garoonka diyaaradaha Sanca ee ay maamusho mucaaradka, si muhaajiriinta “ay dib ugu noqon karaan dalkooda”.[resads_adspot id=””]
Tobanaan kun ayaa lagu dilay malaayiin kalena waa lagu barakiciyay sababo la xiriira iskahorimaadka waxa ay Qaramada Midoobay ugu yeertay dhibaatada bani’aadamnimo ee ugu xun adduunka.[resads_adspot id=”1″]
In kasta oo in ka badan lix sano oo colaado ah, haddana waddanka saboolka ahi wuxuu weli magangal u yahay soogalootiga ka imanaya Geeska Afrika ee u dhow iyaga oo nolol fiican ka doonaya waddamada Khaliijka Carabta ee hodanka ah.
Previous articleWadamadee ayaa joojiyay isticmaalka AstraZeneca’s tallaalka COVID?
Next articleDHAGEYSO IDAACADDA WARDEEQ BARNAAMIJKA HIBADA IYO HAL ABUURKA